Ben 10 lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Games Ben 10 aterineto mitaky fanoloran-tena sy herim-po ianao mba hiatrika ny dragona izay handresy rehefa milalao. Koa satria ny kilalao rehetra dia afaka, ianao dia tsy voafetra ho amin'ny foto-kevitra, ary rehefa straightened ny villains rehetra amin'ny asa fitoriana, manomboka iray vaovao. Ao ny andraikitry ny tovolahy be herim-po tsy maintsy handresy ny toerana jiolahin-tsambo, mampidi-doza fifandirana menacing robot. Rehefa mandalo ny fandrahonana, mandehana any amin'ny fifaninanana eo amin'ny hazakazaka, izay ihany koa ny ady amin'ny fanahy, fa ny fanatanjahan-tena. Ankoatra izany, dia manana be dia be mareva-doko Puzzles sy odevalok.
Ny fahaizana hanova ao anatin'ny anankiray amin'ireto cosmic Super mahery fo manampy maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Ben 10, raha, mazava ho azy, mahafinaritra ny milalao, mba hianatra ny tantaran'i Ben Tennyson. Indray mandeha vintana natsipiny Azy, dieny mbola mandeha ny fitaovana hafa toy ny ara-dalàna fiambenana, fa i Omnitriks. Ankehitriny, dia tsy tsy ny fihaonana amin'ny lehiben'ny fototr'izany - Vilgax, ary aza mijanona amin 'ilay tsisiny, raha ny planeta no tandindomin-doza. Ny ankizilahy dia ho afaka hampiseho herim-po sy ny ady toetra, sy ny zazavavy Ho faly ny mandany fotoana miaraka amin'ny toetra tsara, mifidy ny akanjo.
Ben 10 Hero fotoana
Ben 10: Herisetra
Boky fanoratana Ben10 Monsters
Sarotra fitadidiana Ben 10
Ben'ny tafika 10
Ben 10 Fifaninanana vahiny
Fiadiana Toon 2020
Ben 10 Fidio ny mpividy
Ben 10 Ny lakile miafina
Fandokoana mora ho an'ny ankizy Ben 10
Miverina any amin'ny sekolin'ny boky fianarana
Ben 10 Mifaninana!
Ben 10 Mahita ny fahasamihafana
Ben 10 harafesina Bucket Rescue
Ben 10 fandokoana
Ben 10 Làlan-kizorana
Ben10 Zavatra miafina
Fanairana Ben 10 Alien
Ben 10 mitsambikina hery
Ben 10 Super Mihazakazaka haingana
Ben 10 Zombies Ady lehibe
Ben 10 Mifanaraka amin'ny fahatsiarovana
Ben 10 Krismasy fihazakazahana
Ben 10 kamiao adala
Ben 10 ambanin'ny ranomasina Adventure
Ben 10 Universe miloko
Ben 10 Force Alien fahatsiarovana
Ben 10 mahita ny tsy fitoviana
Ben 10 Mpihady volamena
Ben 10 Mission Tsy azo atao
Ben10: Hetsika volondavenona
Lalao Ben 10 lalao tamin'ny Category:
Farany Ben 10 lalao
Lalao Online Rehetra Ben 10 lalao an-tserasera
Ny mahagaga fanehoana ny herin'ny maizina
rehetra ny zava-mahagaga hitranga amin'ny olon-tsotra izy ireo rehefa tratran'ny iray majika. Izany dia mety ho taratra molotov ny zavatra simika, misy zavatra, zava-nitranga, na hery mitarika avy any ivelany. Mitranga izany ho azy, ary tsy fantatrao ianao, dia ho tanteraka aminao ny ankizilahy na ny akaiky. Zavatra iray no azo antoka - ny fanehoana ny majika mitranga isaky ny dingana, fa tsy ny olona rehetra fotsiny dia afaka mahita izany. Afa-tsy finoana ny mihoatra ny natoraly sy tsy takatry ny saina mikasika afaka miaraka amin'ny olona tsy mampino. Ary raha manana ny fisalasalana, mangataka Ben na ny namany ny zava-nitranga, rehefa mandeha ao amin'ny valan-javaboahary tamin'ny raibeny Max sy ny anabaviny Gwen, dia hitany Omnitriks izay mijery toy ny famantaranandro. Araka ny Hay, fitaovana io dia afaka handrotsaka ny tompony amin'ny tsy manam-paharoa fahaiza-manao, manova azy io ho iray amin'ireo toerana superheroes. Noho izany, ny ara-dalàna taitra ny zaza, nikarakara fanantenana ho an'ny mahaliana fety, Ben tampoka nahazo firenena matanjaka indrindra, ary tafiditra amin'ny lalao mampidi-doza be herim-po.
Ny tetika ny lalao Ben 10
Ny tantara no nanambara tamin'i Ben 10 lalao izay manokatra ny tsirairay sy ny zava-miafina traikefa nahafinaritra vaovao. Indraindray ny zaza tsy maintsy mandeha any lavitra tany mba hanatanteraka ny asa manaraka. Ny lalana no Miparitaka amin'ny loza, angano zavaboary sy ireo izay Raha vao jerena toa tena ara-dalàna. Fifandraisana akaiky kokoa ihany no hanangana ny efitra lamba ny tsiambaratelo sy hanambara ho anareo ny tena endriky ny ny fandrahonana. Lavitra Amazon eyeballs feno biby mpiremby amin'ny tany, ny rano ary mahatratra eny amin'ny lanitra. Far fampielezan-kevitra Mampanantena ny hanan-karena amin'ny zava-nitranga sy ny loza mety hitranga. Hatramin'ny fotoana voalohany, rehefa ny lalao manome antsika ny toerana voalohany, isika dia efa mahita teo anoloan'ny biby fahiny izay nidina ho antsika amin'ny fotoana ny dinosaurs - voay. Na dia ny tenany, ireo biby tsy mampahery, fa mbola miaina ny angona afo. Dia nanova tarehy ny tenany tao amin'ny ony ambanin'ny vatan-kazo, ary miandry ny dingana voalohany mba incinerate ny mafana fofonaina.
Raha dikan hafa ny lalao Ben 10 dia tsy maintsy hilalao ao mafana toe-javatra, ho afa-mandositra ny fipoahana volkano, na mandeha eny an-dalana ho any an-tampon'ny riandrano avo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Teny an-dalana rehetra ianao miandry ny harena, ary raha afaka mahazo ny rehetra mipetraka ao, dia ho iray amin'ireo nohazavaina. Rehefa dinihina tokoa, ihany no nisy lehilahy iray malalaka sy misokatra fo afaka mandresy zava-tsarotra rehetra, amin'ny alalan'ny lalana sarotra, ary hijanona ho mendrika fanahy, ary nalaina harena mba mandany amin'ny antony tsara.
Raha vao Ben nahazo ny fahoriana - izany Omnitriks novakiny ka tsy afaka manamboatra izany andro izany. Rehefa nandre izany, Vilgax - ny tena fahavalo ny zatovolahy sy mahery, mampidi-doza vahiny, nandefa ny tafiny mba hanafika. Ben mitondra fitaovam-piadiana ary tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny miezaka Dodge ny toerana biby goavam-be, mandra-fitaovana no naverina tamin'ny laoniny. Ampio Ben hifindra eo amin'ny kianja filalaovana, fa tsy rehefa tojo vahiny sy ny mandan 'ny toerana. Ny tahan'ny tsy ho ela hitombo mafy, ary kely toerana ho an'ny fanodinkodinana, fa ny mahery fo no manisa amin'ny fanampiana.
Ben 10 lalao an-tserasera mampiseho amintsika ny fomba tovolahy sahisahy samy hafa miady amin'ny fisehoan'ny ny ratsy. Izy mafy fitokonana sy mandeha hiala amin'ny fahavalo. Amin'ny mitovy mora, Ben fanafihana hafa dia taratry fahavalony;
Tsy strasheg hatsiaka sy ny haizina, ary izy no mora mandeha amin'ny mitaingina moto any amin'ny ala, izay natao ny kirihitrala matevina very amin'ny fasana fahiny. Play Ben 10 ny alin'ny Halloween no ho zava-tsarotra. Raha toa ka tsy afaka hiatrika ny fitantanana, fa tsy hoe manorotoro sy nipoaka. Amin'ity tranga ity, hanohy ny lalao an-tserasera Ben 10 dia tsy, ary mahatanteraka miaramila ny fanahy disembodied mihetsiketsika foana.
Araka ny Amerikana multserialu Ben 10 lalao atao matetika. Io feno Epic, milanja gigabytes maro, ary kely tselatra lalao. Ireo mpankafy ny sariitatra tena te-ho toy ny mpilalao fototra, na mahazo ny fahafahana, fara fahakeliny, minitra vitsy mba mahatsapa ny faran'izay-tanjaky ny 10 taona mahery fo. Noho izany, ny lalao rehetra aminy no mankafy mbola tsy nisy toy malaza. Inona no zava-miafina ny toy izany tsotra sy hackneyed tetika? Ahoana no izy afaka mahatratra avo toy izany? Izany tena tsotra.
Misy fototra fanjakana tan-famoronana tantara malaza: ny mahery fo dia tsy maintsy ho ao amin 'ny sokajin-taona ny lasibatra mpanatrika, nefa tsy misy mamirapiratra toetra tsirairay. Noho ny mahazatra mahery fo manana firenena matanjaka indrindra, noho ny nondescript ny toetrany - ny kokoa ny andian-dahatsoratra na ny sarimihetsika fahafahana hahazo laza. Toy izany koa, toy izany koa nitranga tamin'i Ben 10. Izany dia ara-dalàna 10 taona zazalahy, dia nila ady amin'ny anabaviny, maditra ka mandehana any an-tsekoly, nefa izy no firenena matanjaka indrindra, nomena, mifono mistery kokoa fehin-tànana. Ireo rehetra ireo lalao amin'ny Ben 10 ho mahaliana toy ny fiainan'ny tanora mahery fo Amerikana. Andramo - Play Ben 10 dia toy mahaliana toy ny misy lalao natokana ho an'ny tantara an-tsary malaza mpandray anjara. Ny sasany amin'ireo lalao dia famindrana ny Ben 10 eo amin'izao rehetra izao lalao hafa.
Ny Amazing Adventures ny Ben
Ben Tennyson dia tanora ara-dalàna mandra-pahitany ny vahiny Omnitriks fitaovana. Miaraka izany, dia afaka maka ny endriky ny iray amin'ireo folo superheroes. Noho izany, Ben lasa ny mpiaro ny planeta avy amin'ny hery ratsy isan-karazany. Ny Adventures dia tsy hita afa-tsy ny nafana andian-dahatsoratra "Ben 10" - koa io bandy lasa foibe olo-malaza ao amin'ny solosaina maro kilalao, izay mandray anjara amin'ny endrika olombelona, ​​sy amin'ny endrika vahiny superheroes.
Ny sasany Ben 10 lalao an-tserasera misy eo amin'izao tontolo izao. Ohatra, eny ambonin'ny nidina mampatahotra ny tany vahiny mikatsaka ny hitondra ny olona ho andevo. Fa Ben maka ny endriky ny olona-afo. Dia harefo amin'ny hafainganam-pandeha mafy amin'ny lalana be, ary manaraka ny mahery fo nianjera tao amin'ny fiara sy mandeha hihaona miaraka amin'izay koa, mba hamela ny afo projectiles ho biby goavam-be. Amin'ny ankamaroan'ny lalao ireo dia voatahiry Ben hery izay very avy amin'ny mahomby fanafihana ny fahavalo. Matetika, dia azo recharged amin'ny alalan'ny fitaovana iray artifact.
Misy Ben 10 lalao izay ny asa atao amin'ny habakabaka sambo, lavitra planeta, amin'ny lafiny mifanitsy. Ohatra, dia nanambara fa ny fototr'izany Vilgax nanapa-kevitra ny hahazo ny mpamorona ny Omnitrix, hisambotra azy sy hahazo fanampiana faharesena Ben. Mba hisorohana izany, Ben mivadika ho zavaboary iray atao hoe ranon-dra izay afaka maka ny endriky ny zavatra rehetra izay ihany no afaka mikasika. Ranon-dra lasa mandefa sambon-manidina eny Vilgax mitady, miara-mientana miady amin'ny tafiny. Nandritra ny lalao, ny mahery fo dia tsy afaka fotsiny Mitifitra azy tsy manafika fahavalo sambo, fa koa ny "mandeha" avy amin'ny teo aloha sy hanova endrika ho vaovao, mahery sambo.
ny lafiny hafa ny lalao Ben 10
Matetika milalao Ben folo 10 manome fahafahana mba hijanona ao amin'ny anjara asan'ny superheroes sariitatra maromaro. Ohatra, dia mampiasa ny Omnitrix Ben noho ny fanofanana, ary misarika ny sain'ny ny jiolahy, izay nanapa-kevitra ny hangalatra ny fitaovana. Mba hiady izy ireo, dia mila mitsidika toerana maromaro izay mahatonga ny havany Ben Gwen. Ao amin'ny toerana vaovao tsirairay dia afaka ny ho iray ihany no endriky ny Omnitrix, ary manamarina ny toerana, dia ilaina ny miroso amin 'ny famongorana ny fahavalo amin'ny endrika toetra amam-panahy iray hafa. Amin'ny lalao video Ben afaka:
mba hiady teo amin'ny ady totohondry peratra
mitaingina amin'ny fiara
Ny milalao baskety
Amin'ny ny fandraisany anjara ireo akanjo aza ny lalao, Puzzles, ary ny lalao amin'ny ny fikarohana zavatra miafina. Raha fintinina, Ben Tennyson dia lasa iray amin'ireo lalao malaza indrindra litera, ary maro no faly Gamers mihazakazaka ny niainany. Indraindray misy Ben Folo ny lalao sy ny mahery fo, tahaka ny odevalok amin'ny rahavavy Gwen brodilok, na miaraka amin'ny mpiara-miasa Rook. Mahaliana indrindra amin'izy ireo, isika koa voangona ho anareo ato amin'ity fizarana ity ny toerana.